Iridium Browser: Bhurawuza iro rine hanya nezve kuvanzika kwemushandisi | Linux Vakapindwa muropa
Google Chrome imwe yeanonyanya kushandiswa mabhurawuza nekuda kwenhamba hombe yevashandisi veInternet, kunyangwe ini ndisingakwanise kutora izwi kutaura kuti inogona kunge iri nhamba yekutanga browser nekuti inenge ichinaya jecha rakawanda, izvo zvandinogona kuva nechokwadi nazvo Icho chiri pakati peakanyanya kufarirwa mawebhu mabhurawuza.
Chandinokwanisawo kukuvimbisa ndechekuti vashandisi vazhinji yepamusoro uye nyanzvi unogona kutora rusununguko rwekuramba uchishandisa izvi nekuda kwezvikonzero zviviri zvakapusa, yekutanga inokonzerwa nekunyanyisa kudyiwa kwe RAM ndangariro neichi uye chechipiri Imhaka yekuti Chrome inotumira yakawanda ruzivo rwevashandisi kumaseva eGoogle nekuda kwezvinangwa zvakasiyana.
Kana zvasvika pakushanda uye ruzivo, Chrome inopa zvakanakisa zvese, asi iwe unozviwana pamutengo wedhata rako.
Kana iwe uchiziva zvakavanzika uye iwe usingade Google kuteedzera yako data, unogona kushandisa dzimwe nzira kubva kuChannel uye mamwe mainjini ekutsvaga uye / kana zvakavanzika-zvakavakirwa mabhurawuza.
1 About Iridium
1.1 Iridium hunhu
2 Maitiro ekuisa Iridium Browser paLinux?
Iridium Browser ndeimwe yedzimwe nzira yakagadzirirwa kuchengetedza zvakavanzika zvako online.
Iyo Iridium browser yakavakirwa paChromium kodhi base inova yemahara uye yakavhurika sosi browser.
Iridium Iine zvese zvakagadziriswa zvinowedzeredza zvakavanzika zvevashandisi uye chengetedza kuti matekinoroji eazvino uye makuru ashandiswe
Seiri basa hombe Iridium iri basa rekudzivirira otomatiki kutapurirana kwekusarura kubvunza, mazwi akakosha uye metric kune epakati masevhisi uye zvinongoitika nekutenderwa nemushandisi.
Sezvo ivo vari vemuti mumwe chete, anotaridzika akafanana, asi mutsauko uripo mukupa zvakavanzika. Ipo Google Chrome ichitora dhata reanenge ese marudzi, ivo Iridium vagadziri vakagadzirisa kodhi yayo kuti ipe yakawandisa kuvanzika kune vashandisi.
Pindai iwo akakosha maficha uye mashandiro eIridium kuvandudza zvakavanzika zvatinowana:
Dzima "Shandisa sevhisi webhusaiti kuti ubatsire kugadzirisa zvikanganiso zvekufamba"
Dzima Autocomplete kuburikidza nekufanotaura sevhisi kana uchinyora muOmnibox
Gara uchitumira "Do-Not-Track" musoro
Network / DNS kufanotaura yakaremara nekutadza
Bvisa chechitatu-bato makuki by default
Rondedzero yekutora plugins kubva iridiumbrowser.de uko ichagadziridzwa nguva dzose
Saiti yedhata (makuki, yekuchengetedza kwenzvimbo, nezvimwewo) zvinongochengetwa kusvika pakubuda, nekutadza
Pasewedhi haana kuchengetwa nekutadza
Input fomu Autofill yakaremara nekutadza
Yekutsvaga yekutsvaga mupi ndeye Qwant
Load "about: blank" mumatebhu matsva panzvimbo yeinjini yekutsva yakagadzwa uye / kana kukwidziridzwa.
Kwete kuzivisa zvakachengeteka kubhurawuza kudarika.
Izvo hazvishandise iyo ye autocomplete yekurodha sevhisi.
Dzima makuki kuitira zvakachengeteka kubhurawuza kumashure zvikumbiro.
Dzima iyo Battery Hutano API.
Maitiro ekuisa Iridium Browser paLinux?
Si unoda kuisa here iyi browser Mune yako system, mabhurawuza anovandudza anotipa isu mamwe marekodhi kana mapakeji ekumisikidza ayo atinogona kushandisa, zvinoenderana nesystem yaunoshandisa, aya matanho aunofanirwa kutevedzera.
Muchiitiko chevashandisi veDebian, Ubuntu uye masisitimu akatorwa yeizvi, Tinofanira kuvhura terminal uye nekuita inotevera mirairo:
Pamusoro pemhosva yacho Fedora, Korora uye masisitimu akavakirwa pane izvi isu tinofanirwa kunyora zvinotevera:
Kana vachiri kushandisa Fedora 27 kana zvigadzirwa zveiyi vhezheni:
Kune uyo ari vatove kushandisa Fedora 28:
Kana iri kuvhuraSUSE isu tinofanirwa kunyora zvinotevera:
Arch Linux, Manjaro nevashandisi vanobva Tinogona kuisa Iridium kubva kuAUR repositories iyo yatinofanirwa kunge takagonesa mune yedu pacman.conf faira.
Lo isu tinoisa nemurairo uyu:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Iridium Browser: Bhurawuza rine hanya nezve kuvanzika kwemushandisi
Zvakanaka, pawebhusaiti yavo shanduro dzinoita sedzakawanda kana kushoma "kusvika pari zvino" ...
yazvino vhezheni 2018.5
(yakavakirwa paChromium 67.0.3396.40)
yazvino vhezheni 2018.4
(yakavakirwa paChromium 66.0.3359.130)
Pindura kuna joscat
Iyo yakagadziriswa, iyo yekupedzisira yekuvandudza yakabuda mazuva mashoma apfuura. Ndiri kuzvishandisa pachangu panguva ino.
Inotaridzika zvakanaka, asi ini handifarire iyo Chromium kutsamira iyo ichiri kubatwa neGoogle.
vakamusiya ari murombo
iko kushanda kwakaipisisa senge pazasi
Pindura kune hure
mukadzi anopenga akadaro
zvakasiya zvimwe chete
Pindura kune anopenga bonde
Ndanga ndichiishandisa kwemakore matatu uye zvinoita kunge bhurawuza rakanaka, kunyanya rekuvanzika uye kutumira data kuGoogle. Ini ndinoikurudzira, pane imwe bhurawuza yakafanana neiyi Iron browser, yakafanana, ivo veGerman vane Google Chrome injini. Kwaziso kubva kuArgentina.